MAWDUUC 7: SALBATIIMO | Ung & Gravid
MAWDUUC 7: SALBATIIMO
Noocyada caadiga salbatiimo (ka hortaga uurka) oo dhalanyarta loo isticmaalo waxaa waaye koondom iyo P-piller (kaniini).
Koondomka waxaa waaye blaastiko qafiif ah la geliyo guska marka adkaado. Waxuu celinaa biyaha ragg ineysan taggin siilka. Waa muhiimad in uu ninka kondoomka gishto intuusan naagata galin, iyo inuu heeysto koondoomka galmoontaa intee socoto.
Faa’iidooyinka koondoomka uu leeyahay:
Kondoomka waxa waaye salbatiimada kaliya leeska xijiyo cudurada ka immaadaan galmada sida oo kale infekshin ka imaata bakteerida kalamiidya, iyo HIV.
Waxaa ka gadan kartaa meel walba adigoo ubaahneeyn warqada dhakhtarku qoro ee farmashiyaha daawada looga gato iyo tasoo da’ ku xirneeyn.
Waxaa muhiimad ah in aad isku daydid isticmaalka koondoomka oo dareentid in aad ku tahay xaariif iyo inaad isticmaashid “waqtiga saxa ah”.
Kaniiniga ka hortaga uurka waxa waaye kuuwa badankood loo isticmaalo kahortaga uurka Noorweey gudaheeyd. Wuxuu sifiican kaaga difaacaa uurka, laakiin ma’kaa difaacaaya cudurada hoosta. Ugu dhowaan dumarka dhan ayaa isticmaali kara kaniiniga ka hortaga uurka. Qaar ayaa helaan wax yaaba kale kaniiniga uurka keena, laakiin sida caadiga ah wax yaabaha kaniiniga keeno iyaga ayaa iska tagaan waqti yar markuu ka soo wareegato.
Kaniiniga uurka wuxuu u baahanyahay in uu takhtarka waraaq kuu qoro.
Degdega ka hortaga uurka
Hadii aad ka baqaysid inaad uur qaadey galmo kabacdi, waxaa isticmaali kartaa kaniini ka shallaayn ah. Waxa waaye kaniini hormoon ku badanyahay si uu ugu hortago ugxaanta iney korin, kaniiniga waxuu ka hor tagaa sida ey u badan tahay 75-80 purosent. Kaniiniga waxaad ka gadan kartaa farmashiida, adigoo u baahneeyn waraaqda taqtarka qoro.
Xasuusnaaw in aad billaawid kaniiniga degdega ka hor taga uurka 72 saac guda hood markiid aad sameysid galmo aan difaacsaneyn. Kaniiniga ka shallaynta ah waxa oo keeni karaa wax aan fiicneyn iyo waxaa loogu talagalay in aad khaadatid markiid aad u baahantahay xal degdeg ah.
Oggeeysiin badan oo ku saabsan salbatiimo waxaa ka fiirisaa www.amathea.no
Sidee idinka idinlatahay in qaar badankood sameyaan galmo difaacsaneeyn?
Yeey mas’uuliyada saarantahay ineey xasuustaan salbatiimo, gabarta mise wiilka?
Muxuu qofka samaykaraa in ey noqoto caadi sida loo isticmaalo kondoom?